ढिला नगरी जचाउनुस्, मिर्गौला जोगाउनुस्
काठमाडौं : काम, काम, काम ! जति व्यस्त भए पनि समयसमयमा मिर्गाैला जँचाउन नबिर्सनु होला। किनकि मिर्गौला खराब भएको कुनै लक्षण देखिँदैन। ज्यान स्वस्थ देखिँदादेखिँदै खराब हुन सक्छ। जब लक्षण देखिन्छ, कामै नलाग्ने भइसकेको हुन्छ।
मिर्गौलाको काम पिसाब बनाउने, रगत शुद्धीकरण गर्ने, शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सघाउने हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतमा मिर्गौलाको खराबी हुने गरेको छ। यही तथ्यांक आधार मान्दा ३० लाख नेपाली मिर्गौलाका बिरामी भएको डा. काफ्ले बताउँछन्। मुलुकभरका अस्पतालमा ४५ सयभन्दा बढी व्यक्ति डायलासिस गरिरहेका छन्। मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको संख्या १३ सय नाघेको छ।
शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन डा. उत्तम शर्मा स्वस्थ खानपान गर्ने र नियमित व्यायाम गर्ने हो भने मिर्गौला जोगाउन सकिने बताउँछन्। ‘फलफूल एवं आवश्यक मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। नियमित जँचाउन बिर्सनु भएन’, डा. शर्माले भने।
आनीबानी र खानपानका साथै जीवनशैली स्वस्थकर नहुँदा मिर्गौला बिग्रनेको संख्या बढेको छ। ‘उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी जोखिममा पर्छन्। दुखाइ हुनेबित्तिकै पेन किलर सेवन गर्ने व्यक्तिको मिर्गौला एकदम छिटो बिग्रन्छ’, डा. काफ्लेले भने।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी डा. शाहले डायलासिस तथा प्रत्यारोपणमा भन्दा सरकारले रोकथाम र उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘मिर्गौला बिग्रिसकेपछि उपचारमा ध्यान दिनुको साटो सरकारले रोगै लाग्न नदिन जनचेतना फैलाउने र रोकथामका उपायमा ध्यान दिनु पर्छ’, उनले भनिन्। (अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट)
२०७५ फाल्गुण ३० बिहीबार ०७:३६:०० मा प्रकाशित